fampidiranaoracle [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/d/d509119afed3bfda254cf96219d439a4.xhtml failed
Ho dinihantsiaka eto ny rafitra sy ny mombamomba an'i oracle :
Ohatra voalohany, manao fangatahana iray ianao : select nom from client where adresse='Besarety' ;
Ohatra faharoa manova donnee : Update client set nom='RAKOTO' where adresse='Besarety' ;
Inona no mitranga ao amin'ny rollback segment rehefa vita izany ?
Mampiasa karazana fichier 3 i Oracle :
Toy izao no firafitry ny fitahirizana (stockage des donnees) ampisain'i Oracle :
Oracle dia manana karazana fitadidiana roa :
Oracle dia manana Processus maromaro hiasany :
Oracle sy ny olona mpampiasa azy :
03/04/2005 Mpanoratra : HRAZ
Oracle dia rafitra iray afaka itantanana ny ‘donnees’ (izay tsy itako izay andikana azy) afaka mitantana izy donnees relationnelles na objets koa. Ny tena maro mpampiasa moa dia iry voalohany. Izy dia tafiditra amin’irony rafitra client-serveur irony.
Ny BD oracle iray dia mety manana “instance” iray na maromaro. Isaky ny instance iray dia misy memoire atokan’i oracle ho azy mba iasany ary processus izay mandrindra ny fiasan’i Oracle (ohatra oe manoratra donnees any anaty table dia efa misy processus miandraikitra izany, toy izany koa ny mamono donnee sns .. ). Ny “instance” iray dia manana SID (System Identiifer), ohatra oe mabase. Misy fichier init izay (initNOMSID.ora) ijereny ireo parametre ilainy.
Rehefa mi-installe oracle ianao dia efa misy “instance” par defaut proposer-ny (ORCL) fa azonao ovana io.
Mba hampaza tsara ny fomba fiasan’i Oracle dia hanome ohatra roa avy hatrany isika dia avy eo jerentsika amin’izay ireo lakile mandrafitra azy :
1. Misy processus utilisateur mitondra ny requete nao avy any @ programanao makany @ oracle.
2. Ao @ oracle kosa indray dia misy processus server mandray an-tanana izany fangatahanao izany.
3. Jeren’ilay prossecus server raha efa ao anaty fitadidiana momba ny fangatahana izany io fangatahanao io. Raha efa ao dia mandingana any @ dingana faha 5 izy, raha tsy mbola ao kosa dia manao ny dingana faha-4 izy.
4. Exectuer-ny ny fangatahanao dia amoronany version executable izany ary apetrany ao @ fitadidiana momba ny fangatahana izany.
5. Jeren’ilay processus server raha efa ao anaty fitadidiana momba ny donnee ilay client tadivinao ka manana adiresy oe Besarety. Raha efa ao dia mandingana any @ dingana fa 7 izy raha mbola tsy ao kosa dia mano ny dingana faha-6 izy
6. Alain’ilay prossesus server any @ ‘fichier de donnees’ ilay donnees ilainao.
7. Apoitrany ho anao @ zay ilay tadivinao.
1. Misy processus utilisateur mitondra ny fangatahanao avy any @ programanao makany @ oracle.
3. Jeren’ilay prossecus server raha efa ao anaty fitadidiana momba ny fangatahana izany io fangatahanao io. Raha efa ao dia mandingana any @ dingana faha 5 izy, raha tsy mbola ao kosa dia manao ny dingana faha-5 izy.
5. Jeren’ilay processus server raha efa ao anaty fitadidiana momba ny donnee ilay client tadiavinao ka manana adiresy oe Besarety. Raha efa ao dia mandingana any @ dingana fa 7 izy raha mbola tsy ao kosa dia mano ny dingana faha-6 izy.
7. Tazoniny any anatin’izay fitahirizana antsoina oe rollback segment aloha ilay valeur taloha (ohatra oe RABE izany). Tazoniny any anatin’ny fitadidiana antsoina oe Redo izay ihany koa io valeur taloha io.
8. Ovany oe RAKOTO amin’izay ilay nom oe RABE dia mbola tazoniny any anaty fitadidiana REDO koa izany valeur vaovao izany.
9. Rehefa ekenao ny fanovana dia (commit) dia : Misy processus Oracle DBWR (Database Writer) manoratra io valeur vaovao io (avy any @ fitadidiana donnees) makany anaty fichier de donnees. Ny processus LGWR (Log Writer) kosa dia manoratra izay voatahiry ao anaty fitadidiana REDO any anaty fichier de Redo.
10. Raha tsy ekenao kosa ny fanovana (Rollback) dia averin’ilay processus ilay valeur taloha (RABE) izany.
Voafafa ireo donnees voatahiry tao rehefa vita ny transaction-nao Ho an’ny fitadidiana Redo kosa dia misy tranga roa :
Raha ohatra oe asainao miasa mode archivelog i Oracle dia misy processus ARCH izay manoratra izay voatahiry tao @ fichier redo ho fichier d’archive Tena ialina io raha sendra ka oe mila manao restauration ianao
Raha miasa mode noarchivelog kosa i oracle dia very ireo izay voatahiry tao anaty fitadidiana redo.
Fichier de donnees : Mitahiry ireo donnees sy objets utilisateurs
Fichier de controle : Mitahiry ny etat-na base Oracle (ity instance ity dia mampiasa iry fichier de donnees iry, tamin’izao ora no nanamboarana io base io, izao no etat an’ilay base)
Fichier Redo : Mitahiry ireo fiovana rehetra tamin’ny base.
misy koa Fichier d’initialisation : initNOMSID.ora izay mitahiry ireo parametre mamaritra an’i Oracle
Misy ny antsoina oe Tablespace izay lehibe indrindra, izy io dia fitahirizana “logique” ihany fa miaraka aminy dia misy fichier ( iray na maromaro) izay tena itehirizana donnees any @ kapila (data file na fichier de donnees izay efa voalaza etsy ambony). Ity ny syntaxe manamboatra tablespace iray mba ahazoanao ny fifandraisan’i tablespace sy sy datafile :
CREATE TABLESPACE non_tablespace DATA FILE :"C:\__nom_datafile.ora" SIZE 10 M.
Ny tablespace dia fitambarana ‘segment’ maromaro aty no tena misy ireo objet toy ny table na indexe.
Ny segment indray kosa dia feno extents de bloc maromaro.
Ny bloc no fitahirizana kely indrindra amin’i Oracle. Ny angezany DB_BLOCK_SIZE dia miankina amin’ny OS hi-installer azy (tsy azonao ovan io fa tandremo) ny isany kosa DB_BLOCK_BUFFER dia ianao no mamritra azy. Ny angezan’ny fitadidiana donnees dia DB_BLOCK_BUFFER*DB_BLOCK_SIZE.
Fomba fiasany : Amin’ny voalohany dia tonga dia mamaritra segment iray oracle asiany donnee @ table ohatra, rehefa feno io dia maka segment hafa idray izy dia toy izany foana madra-pahfenon’ny tablespace. Misy fomba fitantana manokana ireto tablespace sy segment sy extent ireto.
- Fitadidiana izay iraisan’ny client rehetra : SGA ( System Global Area)
Ny SGA dia mizara karazany maromaro :
Fitadidiana natokana ho an’ny donnee (miankina amin’ny DB_BLOCK_BUFFER, DB_BLOCK_SIZE)
Fitadidiana natokana ho an’ny Redo (miankina amin’ny LOG_BUFFER)
Fitadidiana ho an’ny fangatahana (miankina amin’ny SHARED_POOL_SIZE)
Ny fahaizanao milalao an’io dia tena mahatonga an’i Oracle ho tena mahomby tokoa (mahahaingana ny valim-pangatahanao).
Haingana kokoa ny valim-pangatahanao raha tazonina any anaty fitadidiana ny donnees toy izay isikotra izany donnee izany foana any anaty fichier (izany oe mamaky kapila foana)
- Fitadidiana antsoina oe PGA (Program Global Area) izay mitahiry ny asan’ny processus tsirairay.
- Processus client : Mpanelanelana ny fangatahanao amin’i oracle, Mampiasa SQL*Net ianao ifandraisanao @ serveur oracle, rehefa mi-installe oracle client ianao dia mila mi-configurer io SQL*Net io.
- Processus server : Mpandray an-tanana sy mikarakara ny fangatahanao ao amin’i Oracle
- Processus background :
DBWR (database writer) efa hitantsika etsy ambony
LGWR (Log Writer) efa hitantsika etsy ambony
CHKPT (Checkpoint) izy no mi-declencher ny DBWR sy ny LGWR
SMON (System Monitoring) manaramaso ny fiaingan’ny base izy : rehefa tsy mety miainga ny instance iray (noho ny fahatapahan’i Oracle tampoka ohatra) dia izy no manao ny recuperation an’ilay base. Izy koa manaramaso sao dia misy fitahirizana (tablespace) feno.
PMON (Process Monitoring) Raha misy client manao fangatahana ka tampaka tampoka ny fifandraisana dia izy manadio izay ressource nampiasain’iny client teo iny Misy koa process hafa izay tsy voatery hampiasaina (Dnn, RECO, ARCH (Archive) efa hitantsika etsy ambony ...)
SYS : izy no tompon’ny schemas rehetra mampandeha an’i oracle
SYSTEM : manana fahafahana hamaky ireo schemas an’i SYS izy, afaka manao ny asa fitantanana koa izy Ianao kosa dia manamboatra utilisateur anao manokana afaka miasa ao @ base-nao
Raha hi-installe oracle ianao dia :
Installer-nao ny produit rehetra ilainao ao @ oracle (server oracle, client, ...) : Ampidirinao ny CD oracle dia manaraka assistant ianao
mila mamorona instance (SID) sy nom de la base ianao matetika mitovy ny SID sy ny nom de la base.
Manamboatra ireo fitahirizana isan-karazany hampiasanao (tablespace de travail, tablespace temporaire, ...) rehefa tapitra ny installation an’i Oracle
Mamorona utilisateur hampiasainao @ base-nao (izay omenao ny fahefana tianao)
Manamboatra ireo schemas miasa aminao ( table, view, sequence, index, ...)
Ny fi-installer azy ity dia mila article iray hafa mihitsy raha sitrakareo
Mazotoa aza e
fampidiranaoracle.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43